Chirpify: သင်၏လူမှုမီဒီယာစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းသို့ပြောင်းလဲမှုများကိုပေါင်းထည့်ပါ။ Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 8, 2014 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 8, 2014 Douglas Karr
တေးရေး သုံးစွဲသူများအားဆိုရှယ်မီဒီယာရှိမည်သည့်လမ်းကြောင်းမှမဆိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ပါ ၀ င်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အစပျိုးလုပ်ဆောင်မှုများကိုစျေးကွက်သမားများအားတက်ကြွစေသည်။ လူမှုမီဒီယာအသုံးပြုသူများကို ၀ ယ်ရန်၊ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး ၀ င်ရန်၊ သီးသန့်အကြောင်းအရာများကိုလက်လှမ်းမီစေရန်အပြုအမူများကိုအစပျိုးနိုင်သည်။ ဤတွင်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီတနင်္ဂနွေ, ငါတို့တီဗီကြော်ငြာသစ်ကိုကြည့်ပါ, hashtag ထွက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ငါတို့အသစ်သောအရသာ၏သင့်ရဲ့ pack ကိုဆွဲထုတ်။ #ညနေခင်း pic.twitter.com/ASU58SL1KX
- Oreo Cookie (@Oreo) ဇန်နဝါရီလ 24, 2014
အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည်သီးသန့် hashtag ကိုအသုံးပြုပြီးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမက်ဆေ့ခ်ျကိုရွေးချယ်သည်။ တေးရေး အမှတ်တံဆိပ်ကိုယ်စားချက်ချင်းပြန်တုန့်ပြန်။ သူတို့ကအချက်အလက်တွေ (အမှတ်တံဆိပ်သိချင်သမျှ၊ အသက်၊ အီးမေးလ်၊ အကြိုက်ဆုံးအရောင်များ) ကိုမိုဘိုင်းဖော်ရွေသောပုံစံဖြင့်စုဆောင်းပြီးလူမှုရေးကိုင်တွယ်မှု + အချက်အလက်အချက်အလက်များကိုကုန်အမှတ်တံဆိပ် CRM စနစ်ထဲကိုတိုက်ရိုက်ပေါင်းစပ်သည်။
လိုင်းတစ်ခုစီတွင်မည်သည့်ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်များကိုစိတ်ဝင်စားသူများကိုစိတ်ဝင်စားကြောင်းလေ့လာရန်နှင့်ဖောက်သည်ပရိုဖိုင်းကိုအပြည့်အဝတည်ဆောက်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ တိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်မှုပလက်ဖောင်းသည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ တွစ်တာနှင့် Instagram တို့ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ နောက်ဥပမာတစ်ခုကြည့်ပါ ဦး ။
Spalding Entertainment သည် Chirpify ကိုအသုံးပြုသည် In- နေရာပရိုမိုးရှင်း။ Rascal Flatts နှင့် Jason Aldean နွေရာသီဖျော်ဖြေပွဲများတွင်ဖျော်ဖြေပွဲသွားသူများသည် Chirpify ကိုတွေ့မြင်ကြရသည် လှုပ်ရှားမှု လုပ်ဆောင်မှုကိုခေါ်ရန်နှင့်အတူ Jumbotron ပေါ်တက် တစ်ထိုင်ခုံအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ရိုက်ထည့်ပါ! Tweet #Enter #BurnItDownTour.
Chirpify ၏ပလက်ဖောင်းသည် #actiontags များကိုနားထောင်ပြီးပြိုင်ပွဲဝင်ရန် (အနုပညာရှင်ကိုယ်စား) လူတစ် ဦး ချင်းစီကိုတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုပေးသည်။ ဒီ link ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းပြောင်းလဲမှုပုံစံကိုဖွင့်ပေးတယ်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုစုဆောင်းတယ်။ အနိုင်ရသူကိုအဓိကလုပ်ဆောင်မှုမစခင်ကြိုတင်အကြောင်းကြားပြီး၎င်းတို့ကို (နှင့်မိတ်ဆွေတစ် ဦး) ကို VIP ထိုင်ခုံသို့ခေါ်ဖိတ်သည်။
Chirpify လည်းပေါင်းစပ်ခဲ့သည် analytics ဖောက်သည်များကိုရလဒ်များဖြင့်ပေးရန်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များနှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတစ်ခုစီနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်မှုနှစ်ခုလုံးတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသို့မဟုတ်သူတို့၏အေဂျင်စီများသည်၎င်းတို့အသုံးပြုလိုသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ထံချဉ်းကပ်သည် တေးရေး activate လုပ်ဖို့ - ပလက်ဖောင်းကိုသူတို့လိုအပ်ချက်တွေအတွက် configure လုပ်ဖို့သူတို့နဲ့အတူအလုပ်လုပ်တယ်။